कानुनतः मृत्युदण्डको सजाय हुनै पर्ने भयो
जुलाइ ६, २००९
-सरोजदिलु विश्वकर्मा मैले मृत्युदण्डको पक्षमा धेरैवटा फोरमहरुमा बोल्दा सहकर्मीहरुका मुख रातापीरा र अमिला नभएका होईनन् । केही पत्रपत्रिकामा समेत मृत्युदण्डको कुरा उठाउनेमाथि कटाक्ष गरिएकै हो । यद्यपि, म फेरिपनि ठोकुवाकासाथ भन्छु- हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्डको ब्यवस्था नभएसम्म यो...
नेपालको खसी बजार जस्तो अष्ट्रेलियाको फ्लेमिग्टन बजार
जुलाइ १, २००९
-महेन्द्र / सिड्नी (अष्ट्रेलिया) ब्रो बक्स को जम्मा ५ डलर । एक बाक्सा स्याउको जम्मा ५ डलर । ताजा छ, लिने हो ? यो कुनै नेपालको रत्नपार्क या कालिमाटी तरकारी बजार हैन बरु अष्ट्रेलिया को सिड्नी देखी...
शब्दजाल, भेडातन्त्र र संयन्त्र
जुन २९, २००९
-राजभानु- आजभोलि कुनै पनि समाचार साईटहरु हेर्यो भने खाली ठूला ठूला शब्द ओकलिएको भाषण बाहेक केहि भेटिन्न ! हाम्रो स्वघोषित “बरिष्ठ” नेताहरु अनेक लोकप्रिय नाराहरू बडो नाटकीय ढंगले प्रस्तुत गरेर सर्बसाधारणलाई दिग्भ्रमित बनाउन उद्यत छन ! उद्धेश्य...
जुन २३, २००९
– गणेश खड्का ” प्रतिक्षा ” हरियो भन्नु सालको पात पहेंलो बेसार यता नि पानी उता नि पानी लागेछ असार । पानीलाई पर्‍यो लै रिमिझिमी रुझ्यौ कि रुझिनौ आँखाको चालले बोलाएँ मैले बुझ्यौ...
याहूका मित्रलाई पत्रचार
जुन २०, २००९
प्रिय मित्र ढाकमायाजी, समयले नेटो काटेको कसैलाई थाहा हुँदैन । बगिरहन्छ । चलिरहन्छ । र उडिरहन्छ आफ्नै नियममा । हामी फगत त्यही नियमको बन्दी हौ । न कसैले रोक्न सक्ने न त कसैको ईशारामा चल्ने । गतिमान...
बाटोमा मरे हिउँमुनी लास
जुन १९, २००९
-वसन्त महर्जन संवेदनाहीन पर्यटन व्यवसायी, भरियाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सरकारी नीति विहीनताका कारण ५० हजार भन्दाबढी पर्यटक भरियाहरूको जीवन कष्टप्रद छ । पर्यटन प्रवर्धनको नारा दिनेहरू के भन्छन् भने भरियामाथि हुने गरेका अन्यायहरू बाहिर ल्याउनु हुँदैन...
कसले सुन्ने खड्गे दमाईको यो पीडा ?
जुन १७, २००९
–प्रभा सिं, अछाम मैले केहि वर्ष यो सूदूर पश्चिम क्षेत्रलाई कार्यगत थलो बनाउँदा धेरै मन पोल्ने, आत्मा रुने, आँखा छचल्किने घटना देखेकि छु । कति त पचाएँ । कति बिर्से हुँला । कति कतै मनको कुनै कुनामा...
दक्षिणी सीमाका नागरिक र गौरवमय नेपाली सेना !
जुन १२, २००९
-सरोजदिलु विश्वकर्मा- भारतीय सरकारी भक्षकहरुबाट १५ जना कलिला युवतीहरु दिनदहाडै वलात्कृत भएका छन् । र, करीव ६ हजारजना राप्ती पारी र वारा जिल्लाको दक्षिणी सीमाबाट विस्थापित भई सदरमुकाम वरपर आएका छन् । कतिपय चेली, छोरी वुहारीहरु दिनदहाडै...
जुन ९, २००९
-रत्न संसार श्रेष्ठ, एफ.सी.ए. माग अनुसार बिद्दुत आपूर्ती नहुनाले नेपाली उपभोक्ता लोड सेडिंगको मारमा परेकाछन् । आपूर्ती हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै आवश्यकता अनुरुप नयाँ आयोजनाहरु निर्माण भएर थप बिजुली उत्पादन नहुनु हो । अनि नयाँ...
राष्ट्रनै बिदेशीलाई सुम्पेपछि शरिर सुम्पनु के औचित्य ?
मे ३०, २००९
-बलराम गिरी यस पंत्तिकारको छिमेकी जिल्ला लम्जुङ्गको एउटा गाउँमा एक बृद्घा थिए । उनको वास्तबिक नाम प्रायः लाई थाहा नै थिएन । तर सबैले उनलाई साइलीटारे बूढा भनेर चिन्थे । उनी प्रायः तुरतुरे (तनहूँ) को भारी...